को हुन् म्यान्मारका बौद्धमार्गी बिन लादेन? - Everest Dainik - News from Nepal
को हुन् म्यान्मारका बौद्धमार्गी बिन लादेन?
म्यान्मार धर्मनिरपेक्ष देश हो तर त्यहाँ ९० प्रतिशत बौद्ध जनसंख्या रहेकाले त्यहाँको संस्कृतिमा बौद्ध धर्मको स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ ।
बुद्ध धर्मले शान्तिको शिक्षा दिन्छ तर म्यान्मारका एक बौद्ध भिक्षुलाई भने ‘बौद्धमार्गी बिनलादेन’को संज्ञा मिलेको छ ।
उनै बौद्ध विवादित भिक्षु अशिन विराडूबारे बीबीसी विश्वसेवामा प्रकाशित स्वमिथानन नटराजनले तयार पारेको सामग्री ।
याे पनि पढ्नुस बौद्धमार्गी माथि प्रहरीले गाेली चलाउँदा, ७ जनाको मृत्यु दर्जन बढी घाइते
साभार: बीबीसी विश्व सेवा
ट्याग्स: Buddhist Bin Laden, Buddhist monk against Muslims, myanmar